TaskJuggler: Ihe Nlekọta Nchịkọta Ọrụ Nchịkwa Na-akwụghị ụgwọ | Site na Linux
TaskJuggler: Nchịkọta Ọrụ Nchịkwa Ọrụ Na-emeghe ma Na-emeghe
Linux Post Wụnye | | Aplicaciones
Obere ọnwa gara aga, anyị nyochara ndị ama ama Nchịkwa oru ngo (SGP) de Meghee Isi mmalite akpọ OpenProject na nsụgharị ọhụrụ ya 11.3.1 tọhapụrụ n'oge na-adịbeghị anya. Ọ bụ ya mere taa, anyị ga-aza ụdị aha a akpọrọ "TaskJuggler".
"TaskJuggler" bụ Open Source SGP nke na-aga site na nkwụsi ike mbipute 3.7.1, nke ewepụtara naanị ihe dịka otu afọ gara aga (14/03/2020). Ma na ruo taa, ọ bụ magburu onwe ọzọ maka ndị enyi ọzọ SGP n'efu, freemiums na oghere mepere emepe, dika, OpenProject, GanttProject, Nkọwapụta, LibrePlan, GNOME Planner, Rachota, Calligra Atụmatụ, Mepee Workbench, DotProject, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Maka ndị na-enyochabeghị nke anyị ntinye gara aga banyere OpenProjectDị ka ọ dị na mbụ, anyị ga-ahapụ njikọ dị n'okpuru ebe a, nke mere na mgbe ha nyochachara akwụkwọ a, ha nwere ike ịme ya ngwa ngwa:
"Ọ bụ ihe na-emepe emepe Project Management Software, nke enyere iji nye njikwa oru oma nke kpochapụwo, agile ma ọ bụ ngwakọ ngwakọ na gburugburu echedoro. OpenProject na-enye otutu ọrụ, dika: Otutu oru ngo, ijiko aka (mmekorita), na mmekorita nke oma na ndu ndu nke oru. Na mgbakwunye, ọ na-enye nkwado maka njikwa ọrụ, nsuso nsuso, njikwa chọrọ, atụmatụ ngwaahịa, njikwa nzukọ, nyocha oge yana ịkọ akụkọ ọnụahịa, njikwa mmefu ego, na ọtụtụ ndị ọzọ." OpenProject: Ntughari ohuru nke 11.3.1 nke Software Management Software
1 TaskJuggler: Nchịkwa oru na mgbakwunye na ịbịaru Gantt Chart
1.1 Kedu ihe bụ TaskJuggler?
1.2.1 Njirimara ndị bụ isi
1.2.2 Ọganihu mmemme
1.2.4 Mbipụta weebụ yana ọrụ ọrụ otu
1.3 Nbudata, nwụnye, jiri
TaskJuggler: Nchịkwa oru na mgbakwunye na ịbịaru Gantt Chart
Kedu ihe bụ TaskJuggler?
Dị ka gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, "TaskJuggler" A kọwara ya dị ka ndị a:
"TaskJuggler bụ sọftụwia na ike n'efu nke oge a yana usoro njikwa njikwa ọrụ. Uzo ohuru ya na nhazi oru na ntinye ihe karia ihe ndi ozo karie Gantt chart. Na mgbakwunye, ọ na-ekpuchi ụdị ọrụ niile nke njikwa ọrụ, site na echiche mbụ na mmecha nke ọrụ ahụ. Ọ na - enyere gị aka ịchọta ọrụ, ntinye ego, atụmatụ ego na ego, njikwa ihe egwu, na nkwukọrịta."
TaskJuggler bu free, emeghe iyi (nke ikikere n'okpuru GPL 2.0) ma edekwara ya Ruby. Ọ na-abịa natively na Asụsụ Bekee, ma ọ bụ multiplatform ma dịkwa mfe ịwụnye ma jiri ya niile Sistemụ arụmọrụ ndị kasị ewu ewu na ndị a maara nke ọma (Windows, MacOS na Linux). Otu ihe mere o ji pụta ìhè bụ na ị chọghị a Eserese eserese eserese (GUI). Shell iwu, nchịkọta ederede doro anya, na ihe nchọgharị weebụ bụ ihe ọ bụla ọ ga - ewe onye ọ bụla iji rụọ ọrụ na ya.
Otú ọ dị, n'etiti ya atụmatụ na arụmọrụ ndị ọzọ ama ama anyị nwere ike ịkpọtụrụ ndị na-esonụ:
Njirimara ndị bụ isi
Jikwaa ọrụ, akụrụngwa, na akaụntụ maka ọrụ.
Na-arụ njikwa njikwa ọrụ dị ike.
Ọ nwere ihe magburu onwe ya, zuru ezu na zuru ezu ntuziaka.
Enye ohere echichi dị mfe.
Ọ na-arụ ọrụ na Linux niile, Unix, Windows, MacOS Operating Systems, na ndị ọzọ.
Ọ nwere njikọta zuru oke na ederede ederede Vim.
Enyele akpaka akụ leveling na ọrụ esemokwu mkpebi.
Ọ na-akwado ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche na-akparaghị ókè site n'otu ọrụ ahụ maka nyocha-ọ bụrụ na nyocha.
Enye ohere mgbanwe ọrụ awa na ikike management.
Ọ nwere nkwado maka ọrụ mgbanwe na ọtụtụ oge oge.
Enyele keukwu na mgbanwe akụkọ.
Ọ nwere ọrụ nzacha siri ike.
Gụnyere mpempe akwụkwọ oge yana akụrụngwa na-akọ ọkwa ọnọdụ.
Enye ohere nlekota oru oru na ọnọdụ akụkọ na nkwado dashboard.
Mbipụta weebụ yana ọrụ ọrụ otu
Ọ na-enye ohere ọgbọ nke HTML Report maka mbipụta na weebụ.
Na-akwado mbupụ data na CSV na usoro iCalendar.
Gụnyere ihe sava weebụ jikọtara ọnụ maka ike na mmekọrịta mmekọrịta.
Ọ nwere usoro ihe ntanetịime ihe nkesa na-eji akọ akụkọ maka ọkwa na ọrụ.
Maka ntinye ya, enwere ike itinye ya ozugbo n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile - GNU / Linux Distros, site na Njikwa ngwugwu nwa afọ site ọnụ (console) ma ọ bụ download na ịwụnye si gị ukara download ngalaba. Ma dị mfe hazi site na-agba ọsọ nke usoro gọọmentị kọwara na ndị a njikọ.
para ozi ndị ọzọ Nwere ike ịga na njikọ ndị a:
Akwụkwọ ntuziaka de Usuario
Ebe nrụọrụ weebụ na GitHub
Ebe nrụọrụ weebụ na Gems
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere mmata Nchịkwa oru ngo (SGP) de Meghee Isi mmalite akpọ «TaskJuggler» na ya ọhụrụ anụ version dị nọmba "3.7.1" wepụtara naanị ihe karịrị otu afọ gara aga; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » TaskJuggler: Nchịkọta Ọrụ Nchịkwa Ọrụ Na-emeghe ma Na-emeghe
Copilot, onye enyemaka AI nke GitHub natara nkatọ siri ike site na obodo mmeghe